Yini Injini Yokuqhathanisa Ehamba Phambili? | Martech Zone
NgoLwesine, Juni 14, 2012 NgoLwesine, Juni 14, 2012 Andrew Davis
Isu le-CPC lihlanganise idatha kusuka kubathengisi abaphezulu kwe-100 abasebenza online ngobukhulu obuhlukahlukene, cishe ukuchofoza okuyizigidi ezingama-4.2 kanye nemali eyizigidi eziyisishiyagalombili ukuthola imali ukuthola izinjini zokuthenga ezihamba phambili online.
Izinjini zokuthenga eziqhathanisa zifaka amawebhusayithi afana ne-Pricegrabber, Nextag, Izikhangiso Zomkhiqizo we-Amazon, Shopping.com, Shopzilla kanye ne-Google Shopping.
Esifundweni sihlaziya izindawo ezingcono kakhulu zokuthengwa kwe-ecommerce traffic traffic, imali engenayo, isilinganiso sokuguqulwa, izindleko zokuthengisa, kanye nezindleko ngamanani wokuchofoza ngakunye, bese sizikala ngokuphelele ukunquma umpetha osindayo we-CSE.
Ngezansi ukubuka okufushane kwe-Best Comparison Shopping Sites Report ngo-2012:
Ama-CSEs aphezulu ayi-10 ka-2012
# 1: Ukusesha Komkhiqizo weGoogle (Kungekudala kuzoba Ukuthengwa kweGoogle - KHOKHELWE - imininingwane engaphezulu ngalokho lapha)*
I-Google Shopping yi-CSE ephezulu ebusayo ye-Q1 2011 ne-Q1 2012, futhi ibinesikhathi esithile. Yize abakwaShopzilla beshaya iGoogle ngomthamo wonkana ngo-2011, nezikhangiso ze-Amazon Product zaqhamuka zaya endaweni ephezulu yango-2012, uGoogle wenza njalo inani elikhulu lezimoto, futhi wabusa kuzo zombili izingxenye zemali engenayo yonke.
# 2: I-Nextag
I-Nextag ibuyise indawo yesibili yekhwalithi ephelele ye-CSE ngonyaka wesibili ilandelana futhi yaqinisekisa indawo ephezulu phakathi kwezindawo zokuthenga ezikhokhelwayo zango-2012. Ngenkathi ithrafikhi yonke ye-Nextag yehla kusuka ngonyaka owedlule, iseyinjini yesibili yokushayela engenayo ( Ngemuva kweGoogle), kokubili ngo-2011 nango-2012. I-Nextag iphinde yathuthuka kakhulu maqondana nokuguqulwa nezindleko zokuchofoza ngakunye (CPC) amanani wango-2012.
# 3: Ukubamba intengo
Ngenkathi uShopzilla ethatha indawo ephezulu yezinjini ngonyaka ka-2011, uPricegrabber wakhipha injini ngo-Q1 2012. Yize amazinga e-Pricegrabber's COS ne-CPC ehla, ithrafikhi nemali engenayo yahlala ingaguquguquki kuzo zombili lezi zingxenye.
Amasayithi Okuguqula Okuphezulu
# 1: Usesho Lomkhiqizo we-Google
I-Google Product Search ibiyinjini yesibili ekhiqiza kakhulu izimoto ngo-2012, futhi ingumthombo omkhulu wemali engenayo yabathengisi. Ngenxa yalokho, kuyo yomibili i-2011 kanye ne-2012, iGoogle yathatha igolide le-Conversion Rate ngezilinganiso zethu.
Ngemuva kwaGoogle kwimali engenayo, i-Nextag iyinjini yesibili eguqula kakhulu abathengisi ngo-2012.
# 3: iPronto
Yize iyinjini encane, uPronto upakisha isibhakela esinamandla sokuguqulwa kwabathengisi, uzungeza izinjini ezi-3 eziphezulu ngenani lokuguqulwa.
Izindawo ezihamba phambili zokuthengiswa (COS)
# 1: Ukubamba intengo
Ukulandela ama-CSE wamahhala, i-Pricegrabber ithole indawo ephezulu yenjini ehamba phambili esigabeni sezindleko zokuthengisa (i-COS). Kuphakathi kwezinjini ezehle kuCOS isiyonke kusuka ngo-2011 kuya ku-2012.
Yize i-COS ye-Nextag inyuke ngo-2012, kuseseyindlela yesibili engcono kakhulu yezinjini zokuthenga ze-COS.
Ukuhlanganisa uhlu, i-Shopping.com ishaye izikhangiso zomkhiqizo we-Amazon ngezinjini zesithathu eziphansi ze-COS.
AmaMovers namaShaker wango-2012
Shopping.com iqhubekile yaze yafika endaweni yesine esezingeni lenjini yango-2012, phambilini eyayifikile ngo-6.
pronto isuke ekugcineni emazingeni wonke isendaweni yesi-7 kowezi-2012.
Injini Obonisa: Izikhangiso Zomkhiqizo we-Amazon
Izikhangiso Zomkhiqizo we-Amazon zingenye yama-CSEs amasha lapho ngakho-ke kubonakala ukukhula kakhulu eminyakeni yamuva. I-Q1 2012 ibone ukwanda okuphawulekayo kuthrafikhi yezikhangiso zomkhiqizo we-Amazon, kanye ne-bump yemali engenayo. Yize inani lokuguqulwa kwezikhangiso zomkhiqizo we-Amazon lehle lisuka ku-Q1 2011 laya ku-Q1 2012, ukungena kwabathengisi abasohlwini lohlelo, ukukhuphula ukuncintisana komunye nomunye kungenzeka kube imbangela yokwehla kokuguqulwa.
* I-Google Product Search izoba ngokusemthethweni ukuthenga kwe-Google ngo-Okthoba, funda ukuthi ungazilungiselela kanjani lapha.
Chofoza isixhumanisi esilandelayo ukuze uhlole isifundo esiphelele ku- amasayithi wokuthenga amahle kakhulu.
U-Andrew unguMqondisi Wezokukhangisa we-CPC Strategy. Ngasekupheleni kuka-Septhemba 2010, u-Andrew waqeda ukubhala incwadi yokuqala ngqa yokuthenga ngokuqhathanisa enikeza umbono ophelele wokuthi ungaqala kanjani futhi uphathe umkhankaso wokuthenga ngokuqhathanisa. Namuhla u-Andrew uchitha isikhathi sakhe esiningi ebonisana nabathengisi abaphakathi nabakhulu abaku-inthanethi nezikhungo zokumaketha eziku-inthanethi, futhi futhi ebhala futhi eqondisa i- I-CPC Strategy Blog.
UMuhammad Ahsan Dar
Ngo-Apr 3, i-2014 ku-3: i-49 PM
Yiziphi izizathu eziyinhloko zokuwa kwe-shopzilla?
Sep 28, 2014 ngo-4: 11 PM
Kungakuhle uma ubhala i-athikili efanayo mayelana Nezinjini Zokucinga Zokuqhathanisa ezintsha nezizayo. Ezimbili engizisebenzisa njalo yilezi http://www.slycut.com futhi http://www.price zombie.com futhi banikezela ngamadili ashibhile noma imiphumela emnandi kakhulu yokuthengisa kwendabuko.